Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Khalil Haqqani
Waa xubin sare oo ka mid ah Shabakada Haqqani Network, Khalil al-Rahman Haqqani gacan ka geystaa howlaha dhaqaale ururinta isagoo matalaya kooxda Taliban oo wuxuu taageero u fidiyaa howlaha Taliban ay ka wada Afghanistan dhexdeeda. Bilowga 2010, wuxuu lacag u fidiyay Taliban ka joogay Gobolka Logar, Afghanistan. Sannadkii 2009, Khalil wuxuu ka mid dhowr qof oo mas’uul ka ahaa hayntii maxaabiista codowga ee ay qabteen kooxda Taliban iyo Shabakada Haqqani Network. Khalil wuxuu amarro ah howlihii ay Taliban fulinaysay ka qaadan jirey wiil adeer uu uyahay ee lagu magacaabo Sirajuddin Haqqani, kaasoo ay dowladda Mareykanka bishii Maarso 2008 iyadoo la tiiganayo Amarka Go’aal meel-marinta ee 13224. Sidoo kale Khalil wuxuu matalaayay magaca al-Qaida oo wuxuu gacan ka gaystay howlaha militeriga ee al-Qaida. Sannadkii 2002, wuxuu dirayay niman xoojinaya wixii ka haray al-Qaida ee ku sugnaa Gobolka Paktia, ee Afghanistan.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay Khalil al-Rahman Haqqani inuu yahay Argaggixiso Gaar ah oo Caalami ah sida hoos timaada Amarka Go’aal meel-marinta ee 13224 ee soo baxay bishii Febraayo, 2011.
Taariikhda Dhalashada: 1 bisha Janaayo, 1966
Tariikhda Dhalashada oo ka Badellan: 1958-1964
Magacyada La Sheegto: Khalil ur Rahman Haqqani, Khaleel Haqqani, Khalil Ahmad Haqqani